Zimbabwe · Business ETC
# zimbabwe - Today’s News
Let’s, like, find out? Share23 Tweet SPONSORED # zimbabwe - Sunday 3 January, 2016
From TheJournal.ie Another Cecil
‘Win a lion’ and kill it if you want to: Conservation raffle sparks criticism Jan 3rd 2016, 3:43 PM
9,864 Views 26 Comments One charity described it as ‘appalling’. Share56 Tweet # zimbabwe - Monday 23 November, 2015
From TheJournal.ie Too Hot
Uproar in Zimbabwe as this year’s Mister Ugly deemed too handsome
Nov 23rd 2015, 7:53 AM
24,284 Views 27 Comments Supporters of the favourite in the event mobbed the judges after hearing their decision. Share270 Tweet # zimbabwe - Friday 16 October, 2015
From TheJournal.ie Elephant Hunt
Oct 16th 2015, 6:59 AM
22,810 Views 102 Comments A German national paid the equivalent of €53,000 for a permit to land the bull elephant. Share137 Tweet73 # zimbabwe - Tuesday 13 October, 2015
From TheJournal.ie Off The Hook
This post contains videos Lion-killing dentist who shot Cecil will NOT be facing charges
Oct 13th 2015, 10:38 AM
7,662 Views 43 Comments Zimbabwe had said previously that they would seek to extradite Walter Palmer. Share4 Tweet19 # zimbabwe - Tuesday 8 September, 2015
From TheJournal.ie Trophy Hunting
Sep 8th 2015, 4:56 PM
22,225 Views 67 Comments A group of protesters gathered outside his office. Share35 Tweet39 # zimbabwe - Monday 7 September, 2015
From TheJournal.ie Cheeky
This post contains videos Watch: Elephant sneaks up on Irish tourist and knocks him over
Sep 7th 2015, 8:17 PM
23,592 Views 23 Comments The elephant is said to have been startled as it had bad eyesight and only spotted the men at the last minute. Share36 Tweet18 From TheJournal.ie Cecil
Dentist who shot Cecil questions ‘level of humanity’ of his critics Sep 7th 2015, 9:55 AM
17,971 Views 55 Comments The dentist defended his actions in his first ever interview. Share78 Tweet22 # zimbabwe - Tuesday 25 August, 2015
From TheJournal.ie Camp Hwange
Aug 25th 2015, 2:02 PM
16,894 Views 47 Comments The guide was showing a group of tourists around the reserve. Share43 Tweet16 # zimbabwe - Sunday 2 August, 2015
19,489 Views 38 Comments He’s also not technically Cecil’s brother. Share70 Tweet33 # zimbabwe - Friday 31 July, 2015
From TheJournal.ie Cecil The Lion
Jul 31st 2015, 11:21 AM
31,160 Views 130 Comments Zimbabwe has called for dentist Walter Palmer to be extradited from the United States. Share309 Tweet50 # zimbabwe - Wednesday 29 July, 2015
From TheJournal.ie Sorry But
Dentist who shot Cecil didn’t know the lion was a “known, local favourite”
19,494 Views 101 Comments Two men are due in court on poaching charges related to the lion’s death. Share69 Tweet31 # zimbabwe - Friday 12 June, 2015
From TheJournal.ie Absolute Bargain
Jun 12th 2015, 9:10 PM
26,256 Views 41 Comments “I used it as garden manure. Why would I have kept that dirt?” Share221 Tweet64 # zimbabwe - Tuesday 19 May, 2015
May 19th 2015, 8:05 PM
36,225 Views 17 Comments Father-of-two Michael Anesu Nhema went missing on 14 April. Share159 Tweet32 # zimbabwe - Wednesday 6 May, 2015
May 6th 2015, 9:49 AM
15,325 Views 6 Comments His car was found at Raheen Car Park in Bray three days after he disappeared. Share18 Tweet24 # zimbabwe - Wednesday 11 March, 2015
We’ll Leave it There So: Dodging Bullets wins at Cheltenham, Zimbabwe apologise and all today’s sport Mar 11th 2015, 8:00 PM
9,714 Views 3 Comments Meanwhile, it’s been confirmed that former Man United manager Alex Ferguson is bringing out another book. Share Tweet10 From The42 Unacceptable
Zimbabwe apologise to Mooney and Ireland over ‘alcoholic’ newspaper article
Mar 11th 2015, 12:00 PM
14,998 Views 12 Comments Captain Brendan Taylor has said sorry for the piece, which was published in the Zimbabwe Herald. Share2 Tweet42 # zimbabwe - Tuesday 10 March, 2015
From The42 Attack
‘Alcoholic dumped us out of World Cup’ claims state-owned Zimbabwe paper Mar 10th 2015, 9:55 AM
31,570 Views 46 Comments It’s fair to say they haven’t taken defeat well. Share54 Tweet114 # zimbabwe - Saturday 7 March, 2015
12,144 Views 5 Comments ‘You’ve take his word for it,’ said Brendan Taylor after Ireland’s Cricket World Cup win. Share Tweet10 From The42 COYBIG
Mar 7th 2015, 11:45 AM
36,344 Views 44 Comments Alex Cusack was the hero as he took two wickets in the final over. Share786 Tweet80 # zimbabwe - Friday 6 March, 2015
From The42 Squeaky Bum Time
Mar 6th 2015, 8:15 PM
7,883 Views 2 Comments It’s not quite make-or-break yet but the significance of tonight’s game against Zimbabwe cannot be understated. Share6 Tweet24 # zimbabwe - Saturday 28 February, 2015
Elephants were slaughtered as part of Robert Mugabe’s million dollar 91st birthday bash
Feb 28th 2015, 2:53 PM
19,277 Views 57 Comments The lavish celebration has been slammed by the opposition as “obscene”. Share54 Tweet54 From TheJournal.ie Zimbabwe
Woman jailed over death of baby after stuffing him in drawer ‘for crying too much’
Feb 28th 2015, 9:21 AM
14,375 Views 19 Comments She went to watch television and when she checked on the baby after three hours he was dead. Share3 Tweet10 # zimbabwe - Sunday 15 February, 2015
From The42 Howzat?
Feb 15th 2015, 3:50 PM
5,267 Views 1 Comment What an effort from Zimbabwe’s Craig Ervine Share2 Tweet4 # zimbabwe - Thursday 5 February, 2015
From TheJournal.ie Going Down
This post contains images Photographers in Zimbabwe forced to delete photos of President Mugabe falling
Feb 5th 2015, 10:36 AM
16,619 Views 45 Comments Mugabe sped off in a limousine after the tumble. Share47 Tweet27 # zimbabwe - Wednesday 12 November, 2014
Nov 12th 2014, 7:25 AM
12,885 Views 98 Comments Three refugees who have fled their home countries due to political persecution share their stories. Share83 Tweet91 # zimbabwe - Wednesday 21 May, 2014
Column: Dance has the ability to bring people together, no matter where they’re from
May 21st 2014, 1:00 PM
5,139 Views 13 Comments Africa Day celebrations are taking place nationwide. Here, student and dancer Onai Tafuma writes about her life in Ireland. Share119 Tweet17 # zimbabwe - Tuesday 22 April, 2014
From TheJournal.ie Monthly Wage
Apr 22nd 2014, 4:15 PM
15,590 Views 55 Comments The 90-year-old Zimbabwean Presidents said it was important his government “should recognise the hard times at the moment”. Share10 Tweet25 # zimbabwe - Friday 18 April, 2014
Apr 18th 2014, 5:30 PM
18,104 Views 67 Comments The 90-year-old leader of Zimbabwe was strongly critical of Europe during a speech today. Share34 Tweet19 # zimbabwe - Monday 17 March, 2014
‘We could have won a lot easier than that,’ admits relieved Irish cricket coach Phil Simmons
Mar 17th 2014, 6:47 PM
2,568 Views No Comments “It’s a great start, but there are three games in the group and we know how dangerous UAE can be,” he added. Share Tweet9 From The42 Take A Bow
Mar 17th 2014, 12:52 PM
12,979 Views 30 Comments They ultimately won by just three wickets. Share145 Tweet53 # zimbabwe - Monday 21 October, 2013
From TheJournal.ie Poachers
Oct 21st 2013, 3:30 PM
14,289 Views 46 Comments Other animals including lions, vultures, painted dogs and hyenas have also been killed by poachers at Zimbabwe’s largest game park. Share Tweet # zimbabwe - Monday 12 August, 2013
Aug 12th 2013, 2:01 PM
4,769 Views 17 Comments “If they die, even dogs will not sniff at their corpses” – Robert Mugabe has delivered a blistering public address, his first since the disputed election. Share2 Tweet10 # zimbabwe - Sunday 4 August, 2013
Aug 4th 2013, 9:19 PM
15,472 Views 14 Comments Everyone’s talking about the problems caused by the Dublin Bus strike, the arrest of a man over a 2007 murder and an unusual drug seizure involving ingested cannabis ‘pellets’. Share1 Tweet14 From TheJournal.ie Zimbabwe
Aug 4th 2013, 7:30 PM
6,389 Views 15 Comments Robert Mugabe’s rival, Morgan Tsvangirai, denounced the win as “stolen”. Share4 Tweet4 # zimbabwe - Saturday 3 August, 2013
Aug 3rd 2013, 6:09 PM
4,607 Views 22 Comments Robert Mugabe’s ZANU-PF party claims to have won 61 per cent of the vote, but longtime opposition leader Morgan Tsvangirai says he’ll appeal the result in the courts. Share2 Tweet8 # zimbabwe - Friday 2 August, 2013
Aug 2nd 2013, 10:03 PM
13,003 Views 4 Comments Everybody’s talking about the funeral of the Chada brothers, the SUSI grant system and a worldwide travel alert for US citizens. Share3 Tweet10 # zimbabwe - Thursday 1 August, 2013
Aug 1st 2013, 10:02 PM
12,077 Views 8 Comments Everybody’s talking about the possible Dublin Bus strike, the pay for trainee nurses and life in prison for Ariel Castro. Share5 Tweet8 From TheJournal.ie Mugabe
Mugabe’s party claims victory as observers question vote
Aug 1st 2013, 10:39 AM
4,635 Views 29 Comments Zimbabwe election observers have said that the country’s Presidential election was “seriously compromised”. Share6 Tweet14 # zimbabwe - Wednesday 31 July, 2013
16,167 Views 28 Comments Everybody’s talking about Pat Kenny leaving RTÉ, a newly-published chapter from the Mahon report and a man jailed for the manslaughter of Melanie McCarthy McNamara. Share3 Tweet12 From TheJournal.ie Robert Mugabe
Jul 31st 2013, 9:00 AM
3,144 Views 13 Comments Robert Mugabe has been in power for 33 years, but has promised to step down if he loses this election. Share2 Tweet14 1
Business ETC Latest News Feed#zimbabwe Latest News Feed	Report an error, omission or problem: